ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် မီဆူဘီရှီကော်ဒ့် များ | မီဆူဘီရှီကော်ဒ့် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Dark blue Mitsubishi Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
White Mitsubishi Colt 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
White Mitsubishi Colt 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Pearl White Mitsubishi Colt 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Silver Mitsubishi Colt 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Grey Mitsubishi Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Silver Mitsubishi Colt 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Grey Mitsubishi Colt 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Mitsubishi Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Silver Mitsubishi Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Silver Mitsubishi Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Red Mitsubishi Colt 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Silver Mitsubishi Colt Plus 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Pearl White Mitsubishi Colt 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Pearl White Mitsubishi Colt 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Blue Mitsubishi Colt 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Mitsubishi Colt Plus 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Mitsubishi Colt 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Silver Toyota Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Mitsubishi Colt 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Pearl White Mitsubishi Colt 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
မစ်ဆူ ဘီရှီ ကော့ များ
စူပါ မီနီကားများ ဖြစ်သည့် မစ်ဆူဘီရှီ ကော်ကားများကို ပြည်တွင်းက လမ်းများထက်တွင် တွေ့ကြရပါတယ်။ အများစုမှာ ဈေးသက်သာခြင်း ၊ ပြည်တွင်း လမ်းများနဲ့ ကိုက်ညီခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများကြပါတယ်။ ကားပုံစံမှာ မစ်ဆူဘီရှီတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စီးရီးတွေလိုပဲ ဒီဇိုင်းက ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ကားရှေ့ခေါင်းက မစ်ဆူဘီရှီ အာဗီအာ တို့နဲ့ ဆင်တာကို တွေ့ရပါတယ်. ဒါပေမဲ့ သူက ကား အသေးစား ဖြစ်တဲ့အတွက် အရွယ်အစား ပစ္စည်းတွေကို သင့်တော်အောင် အသေးစားပုံစံ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြည်တွင်းနဲ့ သင့်လျှော်တဲ့ ၁၃၀၀ စီစီ ကားလေးတွေကို အသုံးများကြပါတယ်။
ရှေ့ အင်ဂျင်၊ ရှေ့ ဘီးမောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းလည်း ၁၁၀၀ စီစီကနေ ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၆၀၀စီစီ တို့မှာ စသည့် ဖြင့်လာပါတယ်။ ၁၅၀၀ စီစီမှာ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကိုလည်း တွေ့နိင်မှာပါ။ ဂီယာ ၅ ချက် မန်နျူးယယ်၊ ဆီမီ အော်တို ဂီယာတွေ ပါရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာ ရောက်ထားပြီးသားကားတွေထဲကဆိုလျှင် ရိုးရိုး ကော့ ကားတွေကို တွေ့နိင်သလို ကော့ ပလပ်စ်ကားတွေကို လည်းတွေ့နိင်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ လောက်က စတွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၅၀၀ စီစီ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ၂ ဘီးမောင်း ရနိင်သလို၊ ၄ ဘီးမောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကားတွေဆိုလျှင် ဟန်းဂီယာ တွေနဲ့ပါ တွေ့ရှိနိင်ပါတယ်။
အရွှယ်အစားက နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျ တို့ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကား အသေးစားလေးပါ။ စူပါ မီနီကားတွေထဲမှာ ပါပါတဲ့ ထို အရွှယ်အစား ရှိတဲ့ ကားတွေထဲက ဆိုလျှင် ဥရောပ ကား တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ မီနီ ကော်ပါး ကားလေးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မစ်ဆူဘီရှီ စီးရီးတွေကို ကြိုက်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ ကား အသေးစားလေးတွေကို ၀ယ်ယူလိုသူများ အတွက် မစ်ဆူဘီရှီ ကော့ ရှိပါတယ်။ လူက ငါးယောက်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကားက တံခါး ၅ ပေါက် ( နောက်ဖုံး အပါအ၀င် ) ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ် အမြင့် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ လောက်မှာ ပုံစံ ပိုပြီး ခေတ်ဆန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကော့မှာ နောက်ထပ် မော်ဒယ် နှစ်မျိုးလောက် ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ၂၀၀၆ ကမှ စထုတ်တဲ့ Colt MIEV လို့ခေါ်တဲ့ ဘီးတစ်ဘီးချင်းမှာ လျှပ်စစ် မော်တာတွေ သုံးထားတဲ့ အမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကော့ ပလပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးအစား တစ်မျိုးပါ။ ၂၀၀၄ မှာ ဂျပန်ကို စရောက်ပြီး နိင်ငံတကာ မားကတ်ကိုတော့ အဲဒီနောက်မှ ရောက်ပါတယ်။ ပုံမှန် ကော့တွေထက် ၁၂ လက်မလောက် ပိုရှည်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ပိုပြီး နေရာ ဆန့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမှာ ဆင်ဆာတွေပါ ပါရှိပါတယ်။ ရီမုတ်ကနေ နောက်ဖုံးတွေကို ဖွင့်လို့ရတာတွေပါ ၀င်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် မစ်ဆူဘီ ရှီ ကော်တွေဟာ ဈေးချိုပါတယ်။ ၂၀၁၀ အမည်းရောင် အော်တို၊ ဓာတ်ဆီကိုမှ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်က ၁၃၀၀ စီစီ ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် မစ်ဆူဘီရှီ ကော့ တစ်စီးကို ကျပ်သိန်း ၇၀ လောက်မှာ တောင် ရရှိနိင်ပါတယ်။ အများဆုံးကကျပ် သိန်း ၁၅၀~ ၁၆၀ လောက် သာ ရှိပါတယ်။ Motors.com.mm ကလည်း မစ်ဆူဘီရှီ ကော့တွေကို ဈေးနှုန်းချိုသာ စွာ ဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ်ဆူဘီရှီ ကော်များဟာ စူပါ မီနီကားများ ဖြစ်သည့်နည်းတူစွာ အရွှယ်အစားသေးငယ်လှပပြီး ဆီစား သက်သာတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာအနေဖြင့် ဟန်ဂီယာကို အသုံးပြုပြီး အတွင်းခန်းမှာ ကားကိုယ်ထည်နဲ့ အညီ ကျဉ်းမြောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ လူ (၅) ယောက်စီးကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၁၀၀၀ စီစီကနေ စလာပြီး ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာ ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မော်ဒယ် မြင့်တွေ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မော်ဒယ်တွေကို ၇ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။